Mikel Arteta Oo Ka Hadlay Dagaalkii Ay Dhiigga Iskaga Keeneen David Luiz & Dani Ceballos – Miyuu Sheegay Midka Gardarnaa? – Laacibnet.net
Mikel Arteta Oo Ka Hadlay Dagaalkii Ay Dhiigga Iskaga Keeneen David Luiz & Dani Ceballos – Miyuu Sheegay Midka Gardarnaa?
Tababare Mikel Arteta ayaa ka hadlay dagaalkii la sheegay inuu garoonka tababarka ku dhex maray labada ciyaartoy ee David Luiz iyo Dani Ceballos oo feedh iskala daalay, isla markaana uu midkood dhiig lagaga keenay sankiisa.
Arsenal oo isku diyaarinaysa sidii ay uga soo kaban lahayd guul-darradii kasoo gaadhay kulankii ugu dambeeyey horyaalka Premier League ee ay Aston Villa sida xun ugu garaacday, ayaa waxa soo baxay in labada laacib ee David Luiz iyo Dani Ceballos uu gacan ka hadal ku dhex maray garoonka tababarka, taas oo xaaladda kooxda uga sii dari karta.
Labadan ciyaartoy oo aanu midkoodna tegin kulamadii caalamiga ahaa oo aanay waddamada Brazil iyo Spain u yeedhin ayaa waxay ka ka mid ahaayeen xiddigihii sii joogay garoonka tababarka, waxaana halkaa ku dhex maray muran sababay inay gacan isku qaadaan.
Difaaca reer Brazil ee David Luiz ayaa sanka ka feedhay Dani Ceballos oo isaguna dhiig ka yimid, iyadoo dagaalkooduna uu ka bilowday Luiz oo ka cadhooday taakal uu ku qabtay Ceballos.
Labada ciyaartoy ayaa la sheegay inay markii dambe raalligelin siiyeen ciyaartoyda kale maadaama ay ku kaceen fal xun oo aan looga baranin garoonka kooxda.
Mikel Arteta ayaa la weydiiyey dagaalka dhex maray ciyaartoydiisa, xilli uu ka hadlayay shir jaraa’id oo ka kulanka Leeds United ah, waxaanu yidhi: “Waxba maaha. Garoonka tababarku waa meel aad loogu xafiiltamo, arriman oo kalena marar badan ayay ka dhacaan. Si degdeg ah ayaa kooxda dhexdeeda loogu xalliyaa arrimahan, wax badanna lagama yidhaahdo, wax dhibaato ahi dhexdooda kama taagna (Luiz iyo Ceballos)”.
Arsenal ayaa waxay Axadda la ciyaari doontaa Leeds United oo hore uga soo yaabsatay Liverpool iyo Manchester City, laakiin kulamadii ugu dambeeyey natiijooyin aan wanaagsanayn ka keenaysay.